Ogige Nature Nature, ndị ọrụ afọ ofufo na njem nlegharị anya na Thailand | Akụkọ Njem
Maria | | Tailandia, Asia njem
Enyí bụ akara mba Thailand. Anumanu nke na-anọchite anya ike, nchebe na amamihe. Nke a bụ mkpa ọ dị na mba Eshia na nwa oge ọ bụ isi ihe ọkọlọtọ ya na ọdịnala Buddhist kwenyere na adaeze aha ya bụ Maya rọrọ na enyí ọcha batara ya n'ahụ. Ndị amamihe nke oge ahụ sụgharịrị ya dị ka ọmụmụ n'ọdịnihu nke onye mgbapụta nke ụmụ mmadụ. Princess Maya bụ nne Buda.
Mana mkpa ya abụghị naanị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ nke mmụọ kamakwa akụ na ụba. Kemgbe ọtụtụ narị afọ, ejirila ya na-ebugharị, dị ka anụmanụ na-arụ ọrụ na ọrụ dị ka ọrụ ugbo, na-arụ otu ọrụ ahụ ebe ndị ọzọ ịnyịnya ma ọ bụ ehi na-eme. Ọbụna taa ọ ga-ekwe omume ịhụ enyí na-arụ ọrụ na mpaghara enweghị teknụzụ ọgbara ọhụụ.
Agbanyeghị, ojiji ndị a emeela ụfọdụ oge erigbu na mmegbu nke anụmanụ ndị a. Ọtụtụ ndị amaghị maka mmebi ha na-ata site na ya, yabụ oghere ndị dị ka Elephant Nature Park dị na Chiang Mai na Thailand apụtala ịzọpụta ma chebe ha. Ebe enwere ike ịga leta ya na nke ị nwere ike ịmekọrịta n'ụzọ dị iche iche iji lekọta enyí ndị a mara mma na ọgụgụ isi. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na njem njegharị, ị gaghị echefu post na-esonụ. Ahụmịhe pụrụ iche maka ndị hụrụ anụmanụ n'anya na gburugburu ebe obibi mara mma!
1 Mara ọrụ Elephant Nature Park
1.1 Gini bu Elephant Nature Park?
1.2 Ebee ka Elephant Nature Park di?
1.3 Kedu ụdị anụmanụ bi na Elephant Nature Park?
1.4 Kedu ụzọ ịga leta ogige ahụ dị?
1.5 Kedụ ka ị ga - esi rụkọta ọrụ na ndoputa ahụ?
2 Enyí ndị ọzọ dị na Chiang Mai
3 Omume omenala ndị ọzọ metụtara enyí
3.1 Royal Elephant Museum Bangkok
3.2 Ememe Surin
Mara ọrụ Elephant Nature Park
Gini bu Elephant Nature Park?
Elephant Nature Park mụrụ maka ebumnuche a na 1990 wee nata ọtụtụ onyinye maka ọrụ ya. Na mgbakwunye, ha atụpụtala na ọ bụghị naanị ebe mgbaba maka anụmanụ a na-emegbu emegbu kamakwa ebe etiti iji mee ka a mata banyere nsogbu ndị ọzọ dịka igbutu oke ọhịa ma ọ bụ ichekwa ọdịbendị obodo., na-akwado ọrụ na oriri nke ngwaahịa mpaghara.
Ebee ka Elephant Nature Park di?
A maara Chiang Mai dị ka Rose nke North maka oke ịma mma ya na ọdịbendị na-atọ ụtọ. N'ebe a, ị ga-ahụ karịa ụlọ arụ Buddha Buddhist 300, Doi Inthanon National Park, ugwu dị nsọ nke Doi Suthep na Doi Pui na ebe nsọ pachyderm a ma ama.
Kedu ụdị anụmanụ bi na Elephant Nature Park?
E nwere enyí abụọ: ndị Africa na ndị Eshia, ọ bụ ezie na nke ọ bụla nwere mpaghara dị iche iche. Agbanyeghị, ha na-arụ ọrụ naanị na Thai pachyderms n'ụlọ nsọ.
A na-eme atụmatụ na ihe dị ka enyí 3.000 ruo 4.000 bi na Thailand. Ihe dị ka ọkara bụ ụlọ na ndị ọzọ bi na okike.
Kedu ụzọ ịga leta ogige ahụ dị?
Kedụ ka ị ga - esi rụkọta ọrụ na ndoputa ahụ?
Site na onyinye ego, na-arụkọ ọrụ dị ka ndị ọrụ afọ ofufo na ịgbasa ọrụ Elephant Nature Park rụrụ site na netwọkụ mmekọrịta.
Enyí ndị ọzọ dị na Chiang Mai
Elephant Nature Park abụghị naanị ebe mgbaba maka pachyderms n'obodo a. Goodzọ ndị ọzọ dị mma bụ:
Ogige Egwuregwu Baan Chang: Kwee ka gị na anụmanụ na-emekọrịta ihe, karịchaa n’oge ịsa ahụ na ịnya ịnyịnya n’enweghị oche.
Ulo ugbo Patara: Ọ bụghị ọnụ ala mana ọ na-enye gị ohere ịmekọrịta ndị enyi karịa.
Omume omenala ndị ọzọ metụtara enyí
Royal Elephant Museum Bangkok
Isi obodo Thailand bụ Royal Elephant Museum nke a raara nye ịkpọsa ịdị mkpa nke anụmanụ a dị ka ihe nnọchianya nke mba ahụ na ụfọdụ akụkụ a na-amaghị ama banyere enyí dịka ndụ ha, agwa ha, nri ha, ọnụ ọgụgụ ha, wdg. .
Kemgbe afọ ndị 60, ememme a na-eme naanị maka enyí na Thailand. Ebumnuche ya bụ ị nweta ego iji hụ na ọ dị ndụ nke ndị pachyderms na ndị na-elekọta ha. A na-eme ememme na asọmpi gburugburu ọnụ ọgụgụ enyí ọtụtụ ụbọchị na mpaghara Surin.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Elephant Nature Park, ndị njem afọ ofufo na Thailand
Ọhụrụ 5 ebe ọhụrụ Europe